बसमा भेटिएकी युबतीसँग रोमान्स ! «
बसमा भेटिएकी युबतीसँग रोमान्स !
प्रकाशित मिति : १० भाद्र २०७५, आईतवार १६:३८
यो घटना आजभन्दा ३ वर्ष अगाडि घटेको हो। यसका मूख्य पात्र म र वसमा भेटेकी एक महिला हुन्। म त्यति बेला १९ वर्षको थिएँ र काठमाडौंमा बिए पढदै थिएँ। दशैँ तिहारको बिदा सकेर म आफ्नो क्याम्पस भेटाउनको लागि घरबाट हिडेको थिएँ। म काठमाडौंको लागि बस चढेको थिएँ। त्यहा पूग्न करिब १० घण्टा लाग्थ्यो। बस बसपार्कबाट हिँड्ने बेलामा एक जना महिला चढिन्। उनी दुब्ली थिईन र करिब ५ फिट २ इन्च जति उचाइकी थिइन्। तर उनको अनुहार निकै राम्रो थियो। मेरो छेउको सिट खालि भएको हुनाले उनी मेरो छेउमा आएर बसिन्। उनको उमेर करिब २५ थियो र उन्ले कुर्था लगाईरहेकि थिईन्।
केही समय त हामी बीच मा केही कुराकानी भएन। बस गुडेको करिब २० मिनेट पछि उनले मलाई आफूलाई झ्यालमा बस्नदिन आग्रह गरिन्। मैले पनि हुन्छ भने र उनी झ्यालपट्टि आईन्। त्यसपछि बिस्तारै हामीबीच कुराकानी हुन थाल्यो। उनको नाम लक्ष्मी रहेछ र म उनलाई आन्टी भनि सम्बोधन गर्न लागेँ। उनी काठमाडौं आफ्नो माइती जान लागेकि रहिछन्। हामीबीच राम्रै किसिमको कुरा भयो। बस मुग्लीनमा खाजा खानको लागि रोक्यो। यतिबेला सम्म हाम्रो यात्राको ६ घण्टा भईसकेको थियो र हामी बीच राम्रै सम्बन्ध बनेको थियो।
हामीले सँगै खाजा खायौं र बिल पनि उनले नै तिरिन। यति बेला दिउसोको १ बजेको थियो। बस मुग्लीनबाट हिँडेपछि उनी निदाईन। सुत्ने क्रममा उनी मेरो काँधमा आफ्नो टाउको राखेर सुतिन। म पनि यत्तिकै बसिरहेको थिएँ अकस्मात् बस उफ्रियो। उनी केही चलमलाइन् जसको कारण उनको सल खस्यो। उनिको सलले छोपिएको चार्मिङ बडी देखियो ।
म उनलाई छुनको लागि बहाना खोज्न लागेँ। तर केही पनि भेट्न सकिन। जब बस नौबिसेबाट उकालोमात्र के लागेको थियो जाममा फस्यो। नाग ढुङ्गामा बसले मान्छे हानेकोले जाम भएको हो भन्ने हल्ला आयो। उनी आत्तिन थालिन्। मैले उनलाई सायद चाँडै खुल्ला भनेर फकाएँ। उनले पनि मन बुझाईन र हामी कुरा गर्न थाल्यौं। उनले आफ्नो बारेमा सबै भनिन् र मेरो बारेमा पनि केही बताउन भनिन्। मैले आफू कालीमाटीमा डेरामा बस्ने बताएँ। उनले मेरो बानी राम्रो लागेको भनिन र मेरो मोबाईल नम्बर पनि लिईन र मलाई पनि आफ्नो दिईन्। हामी त्यतिकै गफ गर्दा अँध्यारो हुन लाग्यो। मोबाईलमा टावर टिपेको थिएन यसैले कसैसँग पनि हाम्रो फोन सम्पर्क हुनसकिरहेको थिएन।
हामी त्यो केटो फर्किनु पहिला नै त्यहाँ बाट कुलेलम ठोक्यौं। अरू होटेल पनि खुला भेटेनौं। कुनै उपाय नभएपछि मैले उनलाई मेरो कोठामा जाऊँ न त भने। सुरुमा त उनी निकै अनकनाइन्। तर हाम्रो नजिक ट्यापे केटाहरु आउन थाले पछि भने उनी पनि डराईन र हुन्छ भनिन्। हामी हिँड्दै मेरो कोठा पुग्यौं। मेरा घरबेटी कहिल्यै पनि गेट लगाउन्नन्। यसले आज हामीलाई नै फाइदा भयो। हामी मेरो कोठामा छिर्यौ। कोठामा त आईपुग्यौँ तर सुत्ने प्रबन्ध राम्रो थिएन। ओछ्यानको नाउमा एउटा सानो खाट थियो। भूईमा ओछ्यान लगाउन पनि शिरक डसना थिएन। म ओछ्यानको बारेमा सोच्न थालेँ। उनले पनि अवस्था बुझिन् र बीचमा सिरानी राखेर सुतौंला भनिन्। मैले खाना खाने होईन भने। उनले खासै भोक छैन भनिन्। तर मैले केही खानै पर्छ भने पछि उनले हुन्छ तर के खाने भनिन्। मैले घरबाट ल्याएको झोला खोले र हामीले चाउचाउ बनाएर खायौँ।
जिबनमा पहिलो पटक आफनो कोठामा कुनै एक महिला थियो ! क्रमशः………………………..